China AC Single-dingana 7KW Commercial Charger orinasa sy ny mpamatsy | EN-Plus
AC Single-dingana 7KW Commercial Charger
7KW ara-barotra dovia dia natao ho ampiasaina amin'ny RFID-bahoaka fanamarinana. Fitaovana amin'ny karazana 2 mamaly ny faladiany, ny dovia na dia mifanaraka amin'ny karazana 1 na 2 karazana tariby.
Mifanaraka tsara amin'ny fitsipika ny orinasa, ny tapaky ny volana voamarina dovia mampiasa metatra mba hahazoana antoka marina ka nanorina-in RCD mba hahazoana fiarovana.
Ny dovia azo mifandray amin'ny mamaly ny tambajotra noho ny fanampian'ny EN vavahadin-vavahady. Multiple-bahoaka lovia tamin'ny toerana iray azo tafiditra ao amin'ny tambajotra iray ihany no miaraka amin'ny fifandraisana aterineto fifandraisana.
Iray Type 2 mamaly ny faladiany
Mid voamarina angovo metatra
RCD Type A + 6MA DC mpitsongo
Mifanaraka tsara amin'ny OCPP 1.6 (JSON)
Fiarovana Grade: IP54
Samy faritra fanaraha-maso sy ny hery faritra no mitoka-monina tanteraka. Nitombo anti-jamming fahafahana mba hahazoana antoka mafy orina toe miasa.
Manolotra famoronana fiarovana avy amin'ny hira na knockdown, raha ny fironana fiolahana eo ambonin'ny 30 °, tarika dia ajanona hery ho azy, tsy fahombiazan'ny tatitra ny rafitra miasa, manaisotra na inona na inona.
Tsotra nefa matanjaka
mora tezitra tontonana fitaratra sy vy raharaha rehetra. IP65 fiarovana kilasy ambony kokoa noho ny fenitra indostrialy. Tsotra sy kanto vokatra, manome kalitao anatiny sy ivelany.
naorina ho tafahoatra tontolo iainana toy ny -30 ° C ranomandry sy ny oram-panala, na vanim-potoana mafana 55 ° C sy ny masoandro mivantana. Faritra indostrialy Core mandray kilasy singa sy hanatitra 15 taona famolavolana ny fiainana.
Real-time fikarohana, famandrihana, mamaly ny fifadian-kanina amin'ny alalan'ny fampiharana finday. Safidy anisan'izany ny fandoavam-bola malefaka RFID karatra, sy ny finday fandoavam-bola toy ny PayPal, AliPay, Apple Pay, sns
Standby fihinanana fahefana dia tsy tahaka ny 3 ~ 6W, angovo fahombiazana mitombo indroa noho ny vokatra mitovy lenta eo amin'ny tsena, manamaivana vidin'ny asa.
AC Anarana dreninao
1 dingana + netural + PE
AC Anarana Output
Wall-tendrombohitra / Floor-jiro
mamaly ny Outlet
Mamaly ny faladiany iray (Type 2)
Green / Yellow / Red loko ho an'ny sata hafa
Asehoy ny mamaly ny tahirin-kevitra
4 bokotra for lamba fandidiana
2pcs Mifare karatra
5% ~ 95% tsy misy condensation
Over / Under malefaka fiarovana, fiarovana be loatra, faritra Short fiarovana, Current leakage fiarovana, Grounding fiarovana, Surge fiarovana, Over / Under hafanana fiarovana
tsy voatery Parts
Ethernet / 3G / 4G fifandraisana
Single-dingana / telo-dingana, 4m tariby
Single-dingana, 4m tariby
Cable raikitra fa tsy Socket
Karazana1 na Type 2 charing basy amin'ny 4m tariby
AC Single-dingana 7KW Home Charger
10kw As To DC Portable Ev Charger
As Ev Charger
As To DC Ev Charger
Fast 32a As Current Charger
Mitarika Acid Battery Charger
Output Ev As Charger
Wallbox Ev As Charger
AC dingana telo-2x22KW Commercial Charger
AC dingana telo-22KW Commercial Charger
AC Single-dingana 3KW Portable Charger
Mitarika Acid Battery Charger, Lifepo4 Battery Charger, Ev DC Fast Charger, Ev Dc Charging Stations, Ev Cars On Board Charger, Type2 Plug Ev Charging Station, All Products